AMALUNGELO ENTSHA: UMartin Vrijland
Ingozi yenyukliya yeNyakatho yeKorea ngokubhekiselele kwisongelo esikhulu kunabantu
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	11 Meyi 2017	• 29 Comments
Kwiiveki ezimbalwa ezedlulileyo, iindaba ezongeziweyo kwiiNyulo zaseFransi zijolise kwiisongelo zemfazwe zase-United States eziseMntla Korea. Leli lizwe lizenzeke ngokukhawuleza ngokuba yingozi ngenxa yokuba iya kubandakanywa ekuphuhliseni izixhobo zenuzi kwaye akunakulungelekanga ukuba ubizwa ngokuba yiMerika, kodwa i-alibi enhle [...]
Awunanto ukuchasa inkqubo, kodwa kufuneka uphumelele kuyo
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	2 Meyi 2016	• 1 Comment
Abantu abaninzi bacinga ukuba akufanele uphikise "inkqubo", kodwa kufuneka ufumane iindlela zokuphumelela. Unako, njengokuba kunjalo, fumana iindlela zokufumana imali okanye kuloo nkqubo ngaphakathi kwenkqubo yangoku. Nangona kunjalo ngokwenene ukuba xa ucinezela intshutshiso entwasahlobo, lo [...]
Yintoni ephosakeleyo ngombono weburhulumente wehlabathi jikelele?
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	16 Matshi 2016	• 16 Comments
Umbuzo andivame ukuwufumana kukuba: "Yintoni ephosakeleyo ngurhulumente wehlabathi jikelele?" Ngamanye amaxesha kukho enye into eyongeziweyo: "Kukho nabantu abaninzi abalulekayo abafuna nje isikhokelo kwaye kusebe luncedo ukuba uhlala emhlabeni wonke unemiqathango efanayo? "Imibuzo ebalulekileyo, unokuthi. Oko [...]
Ukutya kwe-Nano-tech yokwenziwa kunye nokukhangela kwe-Google yokungafi
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	27 February 2016	• 12 Comments
I-Google iqeshe i-geneticist ephezulu ekufuneni kwakhe ukungafi. I-Google iphelele 'kwimephu yendlela' njengoko idlalwa ngokugqithiseleyo nguRay Kurzweil oye wazisa igama elithi 'ubuncwane' kwaye uthi abantu base 2045 bafikelela ekungafi. Ngaphambili ndandixelele ukuba baye bafumanisa ukuba ikhowudi yeDNA ingasetyenziswa kwakhona [...]
Uvavanyo olwenziwe ngokuphindwe kabini malunga nokunyaniseka kwenyaniso
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	24 February 2016	• 20 Comments
Konke okukufutshane nawe, nokuba ngumzimba wakho, kudala kuphela xa uyibona. Leyo nkcazo enesibindi. Nangona kunjalo, le nkcazo ixhaswa yizinto ezenzululwazi ekufumaneni i-quantum physics. Iimvavanyo ze-physum zehlabathi jikelele ziphindaphindile ukuvavanya okulandelayo ngamakhulu amaxesha, kuba kukhokelela ekungakholweni kwaye kwangexesha elifanayo unothusa gqitha. [...]
I-matrix ayibalulekanga, yonke into eyenzeka 'kwingqondo'
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	22 Julayi 2015	• 8 Comments
'I-matrix ayibalulekanga, yonke into eyenzeka engqondweni', isicatshulwa ndaliva kule veki kwaye ngokuqinisekileyo ndacinga ukuba kulungile. Ukuthetha nge-matrix kunye nokubunjwa kwayo akubalulekanga ngokupheleleyo; Ukucinga malunga nesakhiwo samandla apha emhlabeni akubalulekanga; zonke iindlela zamava kwenzeka kwi [...]
Ukusebenzisana phakathi komntu kunye nemvelaphi yayo
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	12 Juni 2015	• 19 Comments
Nangona abantu ngokusekelwe ingcaciso wam physics quantum kunye "Double noqhoqhoqho yoLingelo" (jonga apha), isiphelo ukuze ndingathi abe nembono deterministic ubomi, apho yonke into kwingqikelelo kuphela yaye loo mntu kuphela uyakwazi ukufumana "inyaniso" njengoluhlobo lwehologram kwiprojekthi, kukuba [...]
UMoya, umphefumlo nomzimba: yintoni na kwaye yintoni umsebenzi wabo?
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	23 Aprili 2015	• 46 Comments
Kwiinkoliso ezininzi, kuthethwa ngezinye izihlandlo 'umoya, umphefumlo nomzimba'. Ngoko abaninzi abantu baye bakuva malunga nale migaqo, kodwa mhlawumbi kunzima ukuchaza ezimbini zokuqala, ngelixa sonke siyazi ukuba umzimba ungubani. Ndiye ndichaza umzimba wethu njenge-bio-computer kunye [...]
Yonke into phantsi kwelanga inomculo
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	16 Aprili 2015	• 9 Comments
'Yonke into phantsi kwelanga ilungile'; yiyo i-band Pink Floyd ingoma kwingoma yabo 'Eclipse'. Yonke into phantsi kwelanga 'iyayilunga'. Baya kuthetha ntoni na loo nto? Ndinikezele inqaku ngaphambili (jonga apha), kodwa waphefumlelwa namhlanje ukuba abuyele kuyo. Ukuba yonke into [...]
Ungakunqumla njani kwi-matrix kwaye usaphila ngaphakathi kwayo?
Kufakwe kuyo AMALUNGELO ENTSHA	by UMartin Vrijland	16 Aprili 2015	• 4 Comments
NgoSeptemba 2014 ndafumana - to aanleidling lamanqaku bam phezu matrix - izihlandlo eziliqela umbuzo ofundeka ingumongo: "njani ukususa ngokwam ukusuka matrix yaye ndisakwazi sisinde kule matrix" Ngokomzekelo kukho umntu ozayo Umbuzo oceliwe [icatshulwa] Ndandinomdla ixesha elithile [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.442.870
ICorona Crisis: Ingathabatha ukuya kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-3 ukuphuma kokuvalelwa ngaphandle kokuba ulandelele kwangoko kunye neapps
Eyona ngcinga inkulu: Leliphi ilizwe esiya kulakha emva kwentlekele ye-corona?
I-Coronavirus covid-19 kunye nesayensi: Ingena njani emzimbeni wakho kwaye uyidlulisela njani?
UMartin Vrijland op ICorona Crisis: Ingathabatha ukuya kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-3 ukuphuma kokuvalelwa ngaphandle kokuba ulandelele kwangoko kunye neapps
Lidiya Roosje op ICorona Crisis: Ingathabatha ukuya kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-3 ukuphuma kokuvalelwa ngaphandle kokuba ulandelele kwangoko kunye neapps
Cubungula op ICorona Crisis: Ingathabatha ukuya kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-3 ukuphuma kokuvalelwa ngaphandle kokuba ulandelele kwangoko kunye neapps
Hlela incwadi ebanzi yentsholongwane ngoku: